အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုအတန်းများ - Wall Street English
"Wall Street English နှင့် အဂၤလိပ္စာကို အွန်လိုင်းမှလေ့လာလိုက်ပါ"
သင့် ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အတန်းလွတ်မှာကို မပူရတော့ပါဘူး.. Wall Street English Digital Classroom ဖြင့် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး Encounter အတန်းချိန်ကို တက်ရောက်နိုင်တာကြောင့် သင် ခရီးသွားရသည် ဖြစ်စေ မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဖြစ်စေ စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အတန်းချိန်ကို အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်စာရင်းပေးထားရုံဖြင့် သင့် ဆရာ၊ အတန်းဖော်များနှင့် တကွ အွန်လိုင်း စာသင်ခန်းမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် သင်ကြားနိုင်ပါပြီ။
Now 100% Online​
အဂၤလိပ္စာကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် သင်ယူနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ကျွန်တော်တို့၏ ဆုတံဆိပ်များ ရရှိထားသည့် (ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ) အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုစနစ် (online platform) နှင့် လက်တွေ့အောင်မြင်နေသည့် သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တို့က သင့်အား အဂၤလိပ္စာကို လက်တွေ့ကျကျ၊ ထိရောက်မှုရှိရှိဖြင့် သင်ယူနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
"မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန်၌မဆို လေ့လာသင်ယူလိုက်ပါ"
မည်သည့် ဒီဂျစ်တယ်ပစ္စည်း (ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ တက်ဘလက် စသည်တို့) နှင့်မဆို သင်နှစ်သက်သည့် အချိန်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ချောမွေ့ပြေပြစ်စွာ စီစဉ်ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
"တိုက်ရိုက်သင်ကြားပေးသည့် Live အတန်းများ (Live Classes)"
အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အပြင်တွင် လက်တွေ့ အမှန်တကယ် သင်ကြားပေးသည့် ဆရာများ (real-life teacher များ) က သင်၏ သင်ယူလေ့လာမှု ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အဆင့်တိုင်းတွင် ကူညီအားပေးကာ လမ်းညွှန်ထိန်းကျောင်းပေးနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
"လက်တွေ့အောင်မြင်နေသည့် သင်ကြားမှုနည်းစနစ် (Proven Method)"
ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်း (self-study) နှင့် online classes များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကျွန်တော်တို့၏ နည်းစနစ်က သင်၏ အဂၤလိပ္စာသင်ယူမှုပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိစေနိုင်မည်ဟု အာမခံပါသည်။ ​
ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် TV ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်ရှု့ပြီး အဂၤလိပ္စာကို သင်ယူလိုက်ပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ (interactive exercises) ကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီး အသံထွက် အလိုအလျောက် စစ်ဆေးပေးသည့်စနစ် (automatic speech recognition) ဖြင့် မိမိ၏ အသံထွက်၊ လေယူလေသိမ်း မှန် မမှန် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်ကို ချက်ချင်းရယူနိုင်ပါသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်ပါဖြေဆိုရသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ (interactive digital workbooks) ဖြင့် သင်၏ Reading Skill နှင့် Writing Skill ကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းအပါအဝင် မည်သည့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း (ကွန်ပြူတာ၊ laptop ၊ tablet) မဆိုဖြင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီး ဆရာများဆီမှ အိမ်စာလေ့ကျင့်ခန်းများ (homework assignments) ကိုလည်း ရယူဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်း ဂရုစိုက်သင်ကြားပေးမည့် personal tutor ဖြင့် အဂၤလိပ္စာ လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အွန်လိုင်းမှတစ်ဦးချင်း ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့် အတန်းချိန်များ (‘one-to-one’ video conference coaching sessions) က သင်၏ လေ့လာသင်ယူမှုကို ရှေ့ဆက်ခရီးရောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုများပြားသည့် အဂၤလိပ္စကားပြောသူများရှိရာ အွန်လိုင်း အဂၤလိပ္စကားပြောအတန်း (online conversation class) များတွင် သင်ယူထားသည်များကို ထပ်မံလေ့ကျင့်နိုင်ပြီး speaking skill နှင့် အသံထွက်မှန်ကန်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။
အခြားပါဝင်သည့် ကျောင်းသားဦးရေ အများဆုံး ၃ ဦးထက်မပိုသည့် အတန်းများတွင် သင်၏ အဂၤလိပ္စကားပြော စွမ်းရည်များကို လေ့ကျင့်အသုံးချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အထူးတလည် စီစဉ်ဖန်တီးပေးထားသည့် ဒီဂျစ်တယ်စာသင်ခန်း (Digital Classroom) တွင် သင်ထောက်ကူ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချင်းချင်းစကားပြောနိုင်သည့် chat စနစ်နှင့် တစ်ဦးချင်း ပြောဆိုလေ့ကျင့်နိုင်ရန်အတွက် “break out’ group များ ပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် လက်မှတ်ရ (certified) ဆရာများက သင်၏ လေ့လာသင်ယူမှုကို အကောင်းဆုံး ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။ သင်၏ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ (Educational Consultant) က သင်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ဦးတည်ကာ ရှေ့ဆက်၍ လေ့လာသင်ယူသွားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
သင့်အတွက် သင့်တော်သည့် သင်တန်းကာလကို ရွေးချယ်ပါ
သင်တန်းတက်ရောက်မှုပုံစံ (Course Package) များအားလုံးတွင် အောက်ပါ ခံစားခွင့်များ ပါဝင်ပါသည်။
+ Multimedia လေ့ကျင့်ခန်းများ နှင့် Digital Workbook များကို အကန့်အသတ်မရှိဘဲ လေ့လာသင်ယူနိုင်ခွင့်
ဆရာများဦးဆောင်သည့် ဗီဒီယိုဖြင့် သင်ကြားမှုအတန်း ၂၄ ကြိမ်အထိ နှင့် နည်းပြများ၏ ထပ်ဆောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များ
မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မည့် မာလ်တီမီဒီယာ (multimedia) လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ (interactive lessons)
WSE Level 20 အောင်မြင်သူများအတွက် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အဂၤလိပ္စာ ဒီပလိုမာ (WSE Diploma)
ပြီးဆုံးသွားသည့် level တိုင်းအတွက် certificate
သင်၏ အဂၤလိပ္စာ တတ်မြောက်မှု ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရန် အတွက် အာမခံချက်
+ အဂၤလိပ္စာ နည်းပြ (English Coach) ဖြင့် သင်ကြားရမည့်
ဆရာများဦးဆောင်သည့် ဗီဒီယိုဖြင့် သင်ကြားမှုအတန်း အကြိမ် ၄၀ အထိ နှင့် နည်းပြများ၏ ထပ်ဆောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များ
သင်တန်းကာလ ၁ လ အပိုသင်ကြားခွင့်
+ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ဆရာများနှင့် အခြားပါဝင်သည့် ကျောင်းသား ၃ ဦးထက် မပိုသော အွန်လိုင်းအတန်းများ
ဆရာများဦးဆောင်သည့် ဗီဒီယိုဖြင့် သင်ကြားမှုအတန်း ၅၆ ကြိမ်အထိ နှင့် နည်းပြများ၏ ထပ်ဆောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များ
သင်တန်းကာလ ၂ လ အပိုသင်ကြားခွင့်
သင်တန်းကို တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်သွင်း၍ စတင်တက်နိုင်ပါပြီ။
သင်၏ English ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် (level) ကို စစ်ဆေးပေးမည့် ကျွန်တော်တို့၏ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ (educational consultant) များကို ဆက်သွယ်ပြီး သင်၏ ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ကာ မိမိနှင့် သီးသန့်ကိုက်ညီမည့် သင်ယူမှု အစီအစဉ် (personalised learning plan) ကို ရေးဆွဲလိုက်ပါ။
အကောင်းဆုံးသော အတွေ့အကြုံကို စတင်ရန်အတွက် ဖုန်းလေးတစ်ချက်သာ ဆက်လိုက်ရုံပါပဲ!
ဘာကြောင့် Wall Street English ကိုရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
+ နှစ်ပေါင်း ၄၈ နှစ် အဂၤလိပ္စာသင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံ
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် သင်ကြားမှု၏ ဦးဆောင်သူများအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနှင့်ထားသည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများက ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဆုတံဆိပ်များရရှိထားသည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သင်ကြားမှုစနစ် (platform)၊ အထူးစိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ရာ နည်းစနစ်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့် အတူ အဂၤလိပ္စာကို သင်ယူနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းကို ဖော်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ယခုအခါတွင် အွန်လိုင်းပေါ်၌ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသင်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
+ အောင်မြင်ခဲ့သော သင်တန်းသားပေါင်း ၃ သန်း
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် သန်းပေါင်းများစွာသော သင်တန်းသားများကို ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ အဂၤလိပ္စာသင်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
+ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံ
Wall Street English သည် နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး ၄ တိုက်တွင် သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အဂၤလိပ္စာသင်ကြားမှုတွင် ဦးဆောင်သူ (global leader) တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
Chrome Browser မှ WSE Digital Classroom သို့ဝင်ရောက်ရမည့် လင့်ခ်
အက်ပလီကေးရှင်းများကို Install ပြုလုပ်ပြီး အွန်လိုင်း အဂၤလိပ္စာလေ့လာမှုကို စတင်လိုက်ပါ။